Lubnan oo Sacuudiga ku eedeysay in R/W Xariiri uu maxbuus ku yahay Riyadh – Kasmo Newspaper
Lubnan oo Sacuudiga ku eedeysay in R/W Xariiri uu maxbuus ku yahay Riyadh
Updated - November 9, 2017 7:25 pm GMT
London (Kasmo), Xukuumadda Lubnan ayaa aaminsan in R/Wasaare Sacad xariiri lagu khasbay in uu sacuudiga joogo, halkaas oo uu Sambtidii la soo dhaafay uga dhawaaqay istiqaalad uu ka jeediyay Tv-ga Al-Arabiya ee Sacuudiga.
Sarkaal sare oo ka tirsan Xukuumadda magaciisana qariyay ayaa shaaca ka qaaday in Beirut la-tashiyo la samaynayso mas’uuliin kale oo Carbeed, si loogu cadaadiyo Amiir Maxammed bin-Salman in uu R/Wasaaraha oodda ka qaado.
Xiisadda Sacuudiga iyo Lubnaan ayaa cirka maraysa ilaa heer Sacuudi Carabiya ku amartay muwaadiniinteeda in ay si dhakhso ah uga baxaan dalka Lubnan.
Xariiri wuxuu maanta oo khamiis ah kula kulmay Riyadh Safiirka Faransiiska iyo Wakiilka Midowga Yurub, shalayna wuxuu safar booqasho ah ugu tagay Abu Dhabi, Amiirka dalkaas.
Warbaahinta Lubnan waxay ilaa Sabtidii qabaan shaki weyn, khudbaddii uu ka jeediyay Tv-ga lagama soo duubin xarunta gaarka ah ee uu ka degganyahay Riyadh ee waxaa lagu qabtay goob aan la garanaayn. Ereyada khudbadduna ma ahayn qaar uu isagu qoray ama dadka la shaqeeya toona ee waxaa qoray qof ku hadla lahjadda Carabiga ee khaliijka; mas’uuliinta Sacuudiga waa inkirayaan arrimahaas oo idil.
Laakiin Beiruut waxaa laga rumaysanyahay in Sacad Xariiri uusan Riyadh si xornimo ah uga bixi Karin, ilowareedyo kalena waxay ku darayaan in Sacuudigu ku khasbeen in uu Riyadh joogo, istiqaaladdana ka jeediyo Tv-ga.
Madaxweynaha Lubnan, Michel Aouyn ayaa ka caga jiidaya in uu aqbalo istiqaaladda Xukuumadda ilaa uu R/Wasaaruhu ka macneynayo sababaha ku kallifaya, guud ahaanna, ciriiriga la galiyay Xariiri waxaa loo arkaa weerar lagu soo qaaday madaxbannaanida Qarameed ee Lubnan.
Ra’iisal Wasaare Sacad al-Xariiri ayaa Sabtidii, 4tii Nofembar istiqaalad uu ka ahkriyay Tv-ga Al-Arabiya uga dhawaaqay Riyadh, isaga oo ku eedeeyay Dowladda Iiraan faragalinta arrimaha gudaha ee dalkiisa.